All Freight Trucks Allowed to Drive on Yangon-Mandalay Highway | Myanmar Business Today
HomeAutomobileAll Freight Trucks Allowed to Drive on Yangon-Mandalay Highway
The Ministry of Construction, aiming to streamline trade flow, will allow all the freight trucks to drive on the Yangon-Mandalay Highway paying toll charges.
It will allow the trucks to use the highway between October6and November 30 and the trucks must follow the instructions and inspection of the highway police.
Private cars are ordered not to drive over 100 km per hour, passenger buses not exceeding 80 km per hour, light trucks 60 km per hour and freight trucks within 60 km per hour.
All the freight trucks when using the Yangon-Mandalay highway must drive on the right lane without exceeding the speed limit and must not stop except the rest camp.
If the truck driver stop atarandom place or the weight of the truck exceeds the limit, they will not be allowed to use the highway.
COVID-19 ကာလအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင် ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် မြို့ဝင်/ထွက်ကိစ္စများ အဆင် ပြေ ချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကုန်တင်ယာဉ်များ အားလုံး သတ်မှတ် ဖြတ်သန်းခ ပေးဆောင်စေ၍ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကို အောက်တိုဘာလ ၅ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၃၀အထိ ခွင့်ပြုပေးမည်ဟု သိရပြီးဖြတ်သန်းရာတွင် အမြန် လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စစ်ဆေးကြီးကြပ်မှုကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ငယ်များ အနေဖြင့် 100 km/h ထက်ပိုမမောင်းရန်၊ ခရီးသည်တင် Bus ကားများ အနေဖြင့် 80 km/h ထက်ပိုမမောင်းရန်၊Light Truck ယာဉ်များ အနေဖြင့် 60 km/hထက်ပိုမမောင်းရန် ၊ ကုန်တင်ယာဉ်များအားလုံး 60 km/h ထက်ပိုမမောင်းရန် သတ်မှတ်ထား သည်။
အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းမည်ဆိုပါက ကုန်တင်ယာဉ်များအားလုံးသည် လက်ယာဘက် ယာဉ်ကြောမှသာ မောင်းနှင်ရပါမည်ဟုလည်းကောင်း သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက် ပို၍ မောင်းနှင်ခွင့် မပြုပါဟုလည်းကောင်းအသိပေးထားပြီး မော်တော်ယာဉ်များရပ်နားရာတွင် Rest Camp များတွင်သာ ရပ်နားရပါမည် ဟုပါရှိသည်။
ယာဉ်မောင်းနှင်သူများအနေဖြင့် လမ်းဘေးတွင် ကြုံသလို ရပ်နား၍ ကျူ းကျော်ဆိုင်များတွင် စားသောက်ခြင်းများကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက နောက်တစ်ကြိမ် ဖြတ်သန်းခွင့် မပြုတော့ပါ ဟုလည်းကောင်း သတ်မှတ်တန်ချိန်ထက် ပို၍ တင်ဆောင်လာပါက ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Previous articleIndia pledges to help Myanmar to produce COVID-19 vaccine
Next articleMyanmar Extends Stay-at-Home Order Two More Weeks